Kodzero-dzevanhu, 05 Kukadzi 2017
Svondo 5 Kukadzi 2017
Gweta raVaMawarire, VaHarrison Nkomo, vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro sezvo matare amejasitireti asingabvumirwe kupa musungwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yakakomba seiri kupomerwa VaMawarire.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, Amai Rita Makarau, vanoti nyaya yekutungamira sarudzo muZimbabwe yakaoma zvikuru sezvo mapato ose anenge achichema chema nemabatirwo esarudzo.
Mukuru wesangano iri, VaStan Zvorwadza, vanoti vane ruzivo rwekuti zvinhu zvavo zviri kutorwa nemapurisa zviri kuzogovanwa pakati pemapurisa aya nevashandi vekanzuru.
Kusungwa kwaPastor Evan Mawarire Kokonzera Mutauro
Kusungwa kwaPastor Evan Mawarire nemusi weChitatu kwakonzera mutauro munyika vamwe vachizvishora asi vamwe vachiti zvakanaka.
Amai Makarau Vanoti Gadziriro yeSarudzo Iri Kufamba Zvakanaka
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission Amai Rita Makarau vanoti vari kutarisira kuti vachapedza hurongwa hwekuganhura nzvimbo dzekuvhotera mukupera kwemwedzi uno.